सडकपेटीमा को’रोना संक्रमित ! भन्छन- पैसा लिएर आउँछु भनेको थिएँ, रोग बोेकेर घर जान सकिनँ – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सडकपेटीमा को’रोना संक्रमित ! भन्छन- पैसा लिएर आउँछु भनेको थिएँ, रोग बोेकेर घर जान सकिनँ
सडकपेटीमा को’रोना संक्रमित ! भन्छन- पैसा लिएर आउँछु भनेको थिएँ, रोग बोेकेर घर जान सकिनँ
काठमाडौं : टेकु अस्पतालले दिएको कोरोना पजिटिभको रिपोर्ट झोलामा छ । आँखा सुन्निएका छन् । फोक्सो नै फुट्ला जसरी खोक्छन् सास फेर्दा घरघर आवाज आउँछ। ६२ वर्षीय सोम बहादुर लामा आइसियूमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुनुपथ्र्यो, तर घामले तात्तिएको सडक किनारमा भेटिन्छन । राजधानीको गौशाला र पुरानो बानेश्वरबीचको बत्तीसपुतली सडक ।
आइतबार मध्याह्न १२ बजेको चर्को घाम । कालो ज्याकेट, निलो जिन्स पाइन्ट लगाएका सोमबहादुर लामा सडकपेटीको फुटपाथमा बसिरहेका छन् । काँधमा कालो झोला छ, झोलाभित्र कोभिड पजिटिभ भन्ने रिपोर्ट छ । ज्वरोले जिउ थरथर कामिरहेको छ । चर्को घाम र प्यासले मुख पनि प्याकप्याक भएको छ । रिँगटा लागेर ढल्छन् कि भन्ने डर छ । आफैँलाई सम्हाल्न उनी आँखा चिम्म गर्छन्, दुवै हातले टाउको समाउँछन् र लामो सुस्केरा हाल्छन् ।
मुहारबाट कान्ति हराएको छ । रातै भएका उनका आँखा सुन्निएका पनि छन् । फोक्सो नै फुट्ला जसरी खोक्छन् पनि । सास फेर्दा घर घर आवाज पनि आउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइड लाइन अनुसार उनी यतिखेर अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनु पथ्र्यो । ज्वरो अनियन्त्रित र सास फेर्न पनि गाह्रो भएकाले उनी अस्पतालको आइसियूमा स्वाथ्यकर्मीको निगरानीमा हुनुपथ्र्यो ।